‘युद्धमा दुवै हात र आँखाको ज्योति गुमाएँ, घर फर्किदा एकचालीस हजार थमाए’ « Janata Samachar
‘युद्धमा दुवै हात र आँखाको ज्योति गुमाएँ, घर फर्किदा एकचालीस हजार थमाए’
काठमाडौं । जन्मेको उमेर गन्ती गर्दा–मात्र ३२ वर्षमा लागे अमर राई । उनको परिचय भन्नुपर्दा स्थायी घर सोलुखुम्बु, हाल काठमाडौं बौद्ध । तर यतिले मात्र उनको परिचय पूर्ण हुँदैन । किनभने उनी त १० वर्षे सशस्त्र युद्धकालका जुझारु लडाकू र योद्धा समेत थिए । परिवर्तनका लागि जनसेनामा भर्ती भएका राईले त्यसैका लागि बन्दुक बोके,राइफल भिरे,बारुद र बमसँग अभ्यस्त बने ।
उनीहरुले त्यतिखेर चाहेका राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन भए कि भएनन्, त्यो जगजाहेर छ । तर परिवर्तनको त्यो चाहना पछ्याउदै हिडेका पूर्व माओवादी लडाकु अमर राईको जिन्दगीमा भने नसोचेको र कल्पनाबाहिरको परिवर्तन भयोे । सपाङ्ग उनको जीवन अपाङ्ग भैदियो । उनले गरिखाने दुई हात मात्र गुमाएनन्, संसार हेर्ने आँखाको ज्योति समेत गुमाए । र, दश वर्षे जनयुद्धमा उनले गरेको योगदानको मूल्य स्वरुप अपाङ्गता भएर घर फर्किदा उनको हातमा पार्टीले थमाइदियो रु एकचालीस हजार ।
“ परिवर्तनको नाममा दुईटा हात सँगै आँखाको ज्योति गुमाएँ, घर फर्किंदा खल्तीमा जम्मा एकचालीस हजार थमाई दिए–मेरो दुई हात र आँखाको बदलामा…..! रुटिन अफ नेपाल बन्द र गस्सिप क्वीन नेपालले शनिवार,काठमाडौं चक्रपथको चप्पल कारखानामा बाँडेको राहत लिन बौद्धबाट हिडेरै आइपुगेका राईले भने,’अहिले सम्झिदा असाध्य चित्त दुख्छ ।’
हाल बौद्धमा छ उनको बसाइँ । उनी एक्ला मात्र छैनन् । ११ महिनाकी छोरी र बिरामी श्रीमती पनि उनीसँगै छन् । सामान्य अवस्था हुँदो हो त मागेरै पनि एक छाक जोहो गर्न सकिन्थ्यो होला तर अहिले जताततै महामारीको डर छ । त्यही डरले सबथोक बन्द छ । कतिखेर एकमुठी सास पनि बन्द हुन्छ भन्ने त्रास छ । तर सास भइञ्जेल बाँच्नुपर्छ । बाँच्नका लागि कमाउनुपर्छ । कमाउन काम गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हात चाहिन्छ । तर अफसोच ! अमरसँग त्यही दुवै हात छैनन् । हेर्नलाई आँखामा ज्योति छैन । आफ्नो यस्तो अवस्था हुनुलाई उनले नियति ठानेर चित्त बुझाएका छन् । तर परिवर्तनका ठूला ठूला सपना र आश्वासन बाँडेर आफूहरुले लडेको लडाइँले देशमा ठूलो परिवर्तन त भए तर त्यो परिवर्तन उनी जस्ताका लागि भैदिएनन् । उनी अर्थात सोझा,सीधा र निम्न नेपाली जनता ।
राई भन्छन्, “ मेरो आज जुन अवस्था भयो यो सबै परिवर्तनको नाममा भएको जनयुद्धले दिएको उपहार हो । जनयुद्धले केहि कुराहरू पक्कै परिवर्तन भएका छन्–त्यसमा नेताहरूको जीवनशैली अनि मेरो शारीरिक हालत पनि पर्छ । नेताहरूको राजनीतिक क्यारियर त राम्रै बन्यो । उनीहरुको आर्थिक हैसियत पनि सुध्रिए, तर यो हालतको शरीर बोकेर मैले अझै आधा जीवन बाँच्नु नै छ ।“
उनको मसिनो आवाजमा भोक,रोग र शोकको प्रतिविम्ब त थियो नै, तर त्यसमा आक्रोश पनि थियो ।
तस्बिर : मेजन राई
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक, कुन प्रदेशको कस्तो बजेट ?
नारायण श्रेष्ठ/ जनतासमाचार काठमाडौं । देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट
संसद विघटन भएको तीन हप्तामा पनि सुविधाका गाडी सांसदकै कब्जामा, गाडी नबुझाउनेमा विपक्षी दलका नेतादेखि मन्त्रीसम्म
टंक पन्त, जनतासमाचार काठमाडौ । दोसो पटक यहि जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
काठमाडौं । एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको काठमाडौं उपत्यकामा मंगलवारदेखि लूजडाउनको नीति लागू हुने
मनसुनसँगै निषेधाज्ञाकाबीच किसानलाई असारे रोपाइँको चटारो (फोटो फिचर)
असारमा मूख्य बालीका रुपमा धान रोपाई गर्ने चलन छ । काठमाडौंको काँठ क्षेत्रमा डेढ महिनादेखि